सम्पादकीय– एमाले मतदानमा जानुपर्छ! – Hacked by suliman_hacker
सम्पादकीय– एमाले मतदानमा जानुपर्छ!
Published on २४ पुष २०७३, आईतवार २१:०० | by किरातसंसार
राजनीतिक असहमतिका बाबजुद आइतबार संशोधन विधेयक संसद्मा टेबुल भयो। यससँगै संशोधन विधेयकमाथि मतदान हुने भएको छ। यद्यपि, संशोधन विधेयकमाथि सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आएका प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका ९ दलको विरोध कायमै छ। यस्तोमा टेबुल भएको संशोधन विधेयक बहुमतले पारित हुने वा नहुने संशय कायमै छ। तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हारजित निश्चित भएपनि प्रक्रियाबाट कोही पछि हट्न मिल्दैन। यसैले एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले यस प्रक्रियामा भाग लिनैपर्छ र असहमत बुँदाहरुका विपक्षमा मतदान गर्न सक्छन्।
हुन त एमालेले संविधान गतिशील दस्तावेज रहेको स्वीकार गर्दै आएको छ । उसले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। तर, सुरुवातदेखि नै संशोधन विधेयकलाई राष्ट्रघाती कदमको संज्ञा दिँदै फिर्ता लिन सत्तापक्षलाई दबाब दिँइरहँदा एकखाले जमातमा नकारात्मक कुरा सम्प्रेषित भइरहेको छ। अझ बारम्बारको संसद् अवरोधले विपक्षीमाथिको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको प्रतिबद्धतासमेत कमजोर देखिएको छ। यसै सेरोफेरोमा भर्खरै राजधानीमा बृहत जनप्रदर्शनसहितको सभासमेत गर्नाले प्रतिपक्षी दलहरुलाई संशोधनविरोधी रहेको कुरालाई अझ ठोस आधार तयार गरेको छ।
यसैले एमालेसहितका प्रतिपक्षीले सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष–विपक्षमा भाग लिनु पर्दछ। मतदानमा भाग लिई लोकतान्त्रिक पद्दतिलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुर्याउनु अबको रणनीति हुनु पर्दछ। र, एमाले संविधान संशोधनविरोधी होइन भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउँदै राष्ट्रघाती कदमबारे निरन्तर खबरदारी गरिनु पर्दछ। यहीँ नै वर्तमान संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्ने उपायसँगै गलत लागे संविधान संशोधनलाई असफल बनाउने उपाय हो।
पतनोन्मुख कांग्रेस र यसका सारथी शेरबहादुर देउवा! →